10 Farqi Oo Udhaxeeya Suuqgeynta Caanka Ah Iyo Baraha Bulshada | Martech Zone
Talaado, Oktoobar 15, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
On isaga blog suuqgeynta, Robert Weller soo koobay 10 kala duwan ugu weyn ee u dhexeeya classic iyo bulshada marketing warbaahinta buugga Thomas Schenke ee Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada iyo Recht taas infographic.
Liistadu waa mid dhammaystiran, oo bixinaysa faa'iidooyinka xawaaraha, qaab-dhismeedka, joogtaynta, barxadaha, sharci ahaanta, jihada, iyo guryaha wada-hadalka. Waxaa jira agaasimayaal suuq-geyn dhaqameedyo badan oo maalmahan ka shaqeynaya shirkadaha oo aan weli aqoonsan kala duwanaanshaha ama fahmin faa'iidooyinka - waxaan rajeynayaa in muuqaalkan muuqaalku ka caawinayo tilmaamidda dhinacyada muhiimka ah.
Tags: suuqgeynta caadiga ahinfographicrobert wellerwarbaahinta bulshada ayaa loo qabtay si sax ahwarbaahinta bulshada und rechtthomas schenketoushennetoushenne.de
Oktoobar 16, 2013 at 8:58 AM
marka hore aad baad ugu mahadsantahay sidaad u wadaagtay xogtayda, waxaan ku faraxsanahay inaad ka heshay waxtar!
Marka labaad, waan cusbooneysiiyay si aan uga dhigo wax yar oo rafcaan leh. Waan ka xumahay inaad dhib badan tahay 😉 Waxaad ka heli doontaa nooca 2 boggeyga (isla xiriirkii aad ku isticmaashay maqaalkaaga).
Oktoobar 16, 2013 at 1:41 PM
Cajiib ah! La cusbooneysiiyay - aad ayaad ugu mahadsantahay Robert.
Oktoobar 16, 2013 at 4:28 PM
Nov 6, 2013 at 3: 04 AM
10 Farqiga U Dhaxeeya Suuqgeynta Bulshooyinka Classic iyo Social Media- runti waa maqaal wanaagsan. Waxaan mararka qaarkood raadineynaa kala duwanaansho u dhexeeya Classic iyo Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada, halkanna jawaab ayaan ka helay. Mahadsanid
Faa'iido aad u faa'iido leh reference (oo tixraacaya ofc) waxaan u adeegsanayaa muxaadaradayda. Aad baad u mahadsantahay!
Nov 28, 2016 saacadu markay tahay 10:11 PM
Isbarbardhig aad u xiiso badan oo ku saabsan suuqgeynta caadiga ah iyo suuqgeynta dhijitaalka ah. Internetka, waxaan u adeegsan karnaa miisaaniyad yar oo aan ku heli karnaa natiijooyin isku mid ah. Waad ku mahadsantahay wadaagista